DHAGAYSO:Maydadka ardaydii ku dhintay shilkii Bosaso oo baadhis ay ku socoto & Eheladoodii oo la hadlay Puntlandtimes + Akhriso Magacayadooda – Puntlandtimes
BOSASO(P-TIMES)- Kadib markii maanta duleedka magaalada Boosaaso ay shil gaadhi ku galeen arday wax ka baranaysay dugsiga sare ee Ugaas Yaasiin Boosaaso isla markaasna shilkaasi gaadhi ay ku dhinteen 5 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5 kale, kuwaas oo la dhigay cisbitalka guud iyo xarumaha kale ee caafimaadka magaalada Boosaaso.
Maydadkan iyo dhaawacyan ayaa ah arday wax ka baranaysay dugsiga sare ee Ugaas Yaasiin Boosaaso isla markaana dalxiis u aaday duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Ardaydan oo ahayd kuwa hada dhamaynayey dugsiga sare ayaa gaadhigii ay wateen gaadhi kale dusha ka maray xili ay kasoo laabteen deegaanka Laag oo dalxiis ay ku aadeen.
Masuuliyiinta gobolka Bari, maamulka degmada Boosaaso iyo saraakiil ciidan ayaa ku baxay goobta uu ka dhacay shilkaasi waxaana ilaa hada socda baaritaano xoogan oo ay wadaan ciidamadu.
Ardaydii ku dhaawacmay shilkaasi ayaa dhamaantood la dhigay cisbitaalka National oo ku yaala gudaha magaalada Boosaaso si xaaladooda caafimaad wax looga qabto sida Puntlandtimes.com ay u sheegeen qaar kamid ah ehelada ardaydaasi.
Maydadka ardaydani maanta shilka ku gashay duleedka Boosaaso ayaan weli la aasin, waxaana ay ku jiraan Talaagadaha maydka sida Puntlandtimes.com u sheegay maamulaha dugsiga sare ee Ugaas Yaasiin Boosaaso Maxamed Ciise Cismaan oo wiil uu dhalay isna ku dhintay shilkaasi.
Magacyada ardaydii ku dhintay shilkii maanta
Hashim Maxamed Ciise
Magacyada ardaydii ku dhaawacmay shilkii maantaa
Maxamud Cumar Kurubood
Warsidaha Puntlandtimes.com kala soco Warar sugan & Xoggo rasmi ah